Al-shabab oo soo bandhigtay Ajaanib ay ku eedeeyeen in ay u basaasayeen reer Galbeedka (SAWIRRO). | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Al-shabab oo soo bandhigtay Ajaanib ay ku eedeeyeen in ay u basaasayeen reer Galbeedka (SAWIRRO).
Al-shabab oo soo bandhigtay Ajaanib ay ku eedeeyeen in ay u basaasayeen reer Galbeedka (SAWIRRO).
Tuesday, September 19, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Xarajada Al-shabab ayaa soo bandhigtay Sawirrada iyo Magacyada saddex ka mid ah dadka AJaanibta ah ee iyaga ku jiray,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay la shaqeynayeen Sirdoonka Kenya.
Saddexda Nin ee la soo bandhigay ayaa waxaa ay u dhasheen Dalka Kenya,waxaana lagu tuhmayaa in ay la shaqeynayeen sirdoonka dagaalka kula jira Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa magaca Ninka 1aad ku sheegay Cabdullahi Talaal Muuse oo 28 jir ah,kaas oo ka soo jeeda Magaalada Nairobi ee xarunta Dalka Kenya,waxaana lagu eedeeyay in uu wadashaqeyn la leeyahay sirdoonka Kenya.
Ninkan ayaa muuqaalka ku sheegaya in uu u shaqeeyo sirdoonka Kenya islamarkaana mushaar ka qaato sirdoonka Kenya isaga oo ka tirsan Al-shabaab,waxaana uu Sirdoonka Kenya u qaabilsan yahay gudbinta Sawirrada iyo Magacyada iyo Taleefan nambarrada hoggaamiyayaasha Al-shabab.
Ninka 2aad ayaa magaciisa lagu sheegay C/Casiis Mukayo Omamabia,waxaana uu Al-shabaab dhexdooda ka gudbin jiray mcaluumaadka sirta ah iyo xogaha gaarka ah isaga oo la shaqeyn jiray Kenya lana qabtay isaga oo isku dayaya in uu ka baxsado AL-shabaab.
Ninka saddexaad ayaa lagu magacaabaa Haashim Cismaan Shilaali,waxaana uu Kenya u qaabilsanaa gudbinta macluumaadka,xogta iyo wixii ku saabsan ajaanibta u dhashay Ingiriiska ee ka bar bar dagaallama Xarakada Al-shabab.